स्वरसम्राट नारायण गोपालः चुरोट, रक्सी नखाने भए झन् उनको स्वर कस्तो हुँदो हो?
काठमाडौं, १९ मंसिर - आज स्वरस्रमाट नारायण गोपालको २७ औं स्मृति दिवस। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका एक अमर तारा । उनै स्वरसम्राट् जसका गीत आम मानिसका मनमा सजिलै बास बसेका छन् ।
शुरूशुरूमा अगाडि आएर गीत गाउन समेत लजाउने नारायणगोपाल पछि भने आधुनिक गायनको क्षेत्रमा पर्यायका रूपमा स्वरसम्राट् भएर उदाए । नेपाली संगीतको क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी गीतमा आफ्नो स्वर र ३ सयभन्दा बढी गीतमा संगीत भरेका उनले वि.सं. २०२३ मा संगीत विधाका लागि सर्वोत्तम संगीतकारको पुरस्कार पाएका थिए । त्यो उनको पहिलो पुरस्कार थियो ।
उहाँ फुटबलमा एकदमै चासो राख्नुहुन्थ्यो । यतिसम्म कि, उहाँ बिरामी भएर वीर अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो तर फुटबल हेर्न घर आउनुहुन्थ्यो । वीर अस्पतालको आइसियुमा हुँदा पनि ‘स्वर्णिम सन्ध्या’ जस्तै अरू कार्यक्रम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो । काम बिगारें भने मलाई कहिलेकाहीँ गाली गर्नुहुन्थ्यो तर असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो । त्यो त एउटै परिवारमा भएपछि हुनु स्वाभाविक नै हो । उहाँले कहिलेकाहीँ रक्सी खानुहुन्थ्यो तर रक्सी खाएर हल्ला गर्दै हिँड्ने उहाँको आदत थिएन ।